बेस्ट Google वेब स्क्रैपर - सेल्टल्ट विशेषज्ञ
ग्यारिटिज, गिटलैब र बिटबकेट जस्तै, गित हब एक राम्रो तरिकाले नियन्त्रण प्रणाली हो जसले तपाईंको डेटा पठाउन योग्य र स्केलेबल योग्य रूपमा बचत गर्दछ. GitHub दुई प्रकारको प्लानहरू प्रदान गर्दछ: नि: शुल्क भण्डारहरू र सशुल्क भण्डारहरू. यसले प्रायः 15 मिलियन भन्दा बढी सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू र विश्वभरि लगभग 56 मिलियन भण्डारहरू छन्.
प्राथमिक कारणहरु को GitHub को उपयोग गर्न को लागि:
1. तपाईंको खुला स्रोत परियोजनाहरूमा योगदानहरू:
GitHub तपाईंको मनपर्ने खुला स्रोत परियोजनाहरूमा योगदान गर्दछ र धेरै समय र ऊर्जा बचत गर्दछ।. यदि तपाईंको परियोजनाले विकिकहरू समावेश गर्दछ वा ट्रयाकहरू जारी गर्दछ भने, तपाईं GitHub को लागी अप्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको काम सजिलै संग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ - mejor fotografo artistico del mundo. सिम्फनी, ज्यानोगो, र रुबीमा रुबीले यो सेवा प्रयोग गरी टाढाका कर्मचारीहरूको नयाँ परियोजनाहरू र योगदान विकास गर्न प्रयोग गर्छन्.
GitLab र BitBucket जस्तै, GitHub इन्टरप्राइजेज ठूलो आकारको उद्यमहरूका लागि डिजाइन गरिएको छ।. यसले प्रोग्रामरहरू र विशेषज्ञहरूलाई एक कर्पोरेट फायरवाल पछि आफ्नो भण्डार होस्ट गर्न मद्दत गर्दछ.
मार्कमार्क एक विशेष पाठ सम्पादकको साथ कागजात लेख्ने अभ्यास हो. GitHub ट्रयाकहरूमा विकिकिस, टिप्पणीहरू र मुद्दाहरू जारी गर्न सक्षम छ र यसरी तपाईंको कामलाई सजिलो पार्दछ. अन्य शब्दहरूमा, यसको मतलब यो हो कि तपाईं यस सेवाको साथ व्यावसायिक कागजातहरू लेख्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाइँसँग पर्याप्त प्रोग्रामिङ वा कोडिङ कुञ्जीहरू छैन भने, तपाईं अझै पाठ कागजातहरू शिल्प गर्न GitHub गर्न सक्नुहुन्छ.
4. सानो र मध्यम आकारको कम्पनीहरूको लागि उपयुक्त:
GitHub सँग उत्कृष्ट कागजातहरू छन्. यो सानो र मध्यम आकारको कम्पनीहरूको लागि उपयुक्त छ. GitHub खण्डमा, तपाईं उपयोगी लेखहरू र ट्रेन्डिंग विषयहरू पाउन सक्नुहुन्छ. के तपाईँ जान्नुहुन्छ कि Git कार्यप्रवाह कसरी सिर्जना गर्ने? तपाइँ यस सन्दर्भमा सबै चीजलाई थाहा पाउन यसको ब्लग गर्न सक्नुहुन्छ. GitHub केही महिना पहिले गिस्ट शुरु भयो. Gist संग, तपाईं विभिन्न फाइलहरू Git भण्डारमा सजिलै घुमाउन सक्नुहुन्छ. यसको अतिरिक्त, Gist ले तपाईंको विन्यास फाइलहरू र स्क्रिप्टहरूमा परिवर्तनहरू साझेदारी गर्न र ट्रयाक गर्न सजिलो बनाउँछ. Gist एक पास्ताबिन को सरल अवधारणा मा बनाउँछ र कोड स्निपेट्स र एसएसएसएल एन्क्रिप्शन निजी पेस्ट को लागि जोड्छ.
5. GitHub मार्केटप्लेस सेवा:
GitHub ले यसको प्रयोगकर्ताहरूको लागि बजार सेवा पनि प्रदान गर्दछ. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सेवाहरू तल उल्लेख गरिएका छन्:
• रोलबबार - GitHub वास्तविक समय डिबगिङ उपकरण प्रदान गर्दछ र रूबी, नोडसँग मिल्दो छ।. js, PHP,. नेट, जाभास्क्रिप्ट, पाइजोन, एन्ड्रोइड, सी ++, आईओएस, जावा र जावा.
• ट्रेविस सीआई - यसले तपाईंलाई GitHub वातावरणमा पूर्ण नियन्त्रण दिन्छ र टोलीका लागि विकसित गरिएको छ जुन विभिन्न भाषामा वेब सामग्री अनुवाद गर्दछ।.
• GitLocalize - Git तपाईंको GitHub भण्डारको साथ सिङ्कहरू बनाउनुहोस् र तपाईंको कामको रेकर्ड राख्न मद्दत गर्दछ।.